Ukubala utshintsho kwi-Entropy ukusuka kwiHlelo lokuSabela
Bala iTshintsho kwi-Entropy kwi-Heat of Action
Isibonelo sokungena kwiingxaki
Igama elithi "entropy" libhekiselele kwingxaki okanye ingxabano kwinkqubo. Enkulu i-entropy, enkulu ingxaki. I-Entropy ikhona kwi-physics nakumakhemikhali, kodwa kunokuthiwa kukho kwimibutho yabantu okanye kwiimeko. Ngokubanzi, iinkqubo zithatha kwi-entropy enkulu; Enyanisweni, ngokomthetho wesibini we-thermodynamics , i-entropy yenkqubo ekhethiweyo ayinakuze yenzeke ngokukhawuleza. Lo mzekelo umngeni ubonisa indlela yokubala utshintsho kwi-entropy yendawo yokusingqongileyo elandelayo emva kokusabela kweekhemikhali ngexesha lokushisa kunye noxinzelelo.
Okokuqala, phawula ukuba awukabala i-entropy, S, kodwa kunoko utshintshe kwi-entropy, ΔS. Lo ngumlinganiselo wesifo okanye ukungahambi ngokungaqhelekanga kwinkqubo. Xa i-ΔS ichanekile ithetha ukuba indawo engqongileyo yenyuka entropy. Ukuphendula kwakunzima okanye i-exergonic (ukuthathwa kwamandla kunokukhutshwa kwiifomu ngaphandle kokushisa). Xa kuphuma ukushisa, amandla akwandisa ukunyuka kwee-athomu kunye nama-molecule, okukhokelela ekukhathazeni okongeziweyo.
Xa i-AS ingalunganga ithetha ukuba i-entropy yendawo ejikelezileyo iyancitshisiwe okanye ukuba iindawo ezikufutshane zenze umyalelo. Utshintsho olubi kwi-entropy lubangela ukushisa (ukuphela kombane) okanye amandla (endergonic) ukusuka kwindawo ejikelezileyo, okunciphisa i-randomity or chaos.
Iphuzu elibalulekileyo lokugcina engqondweni kukuba ixabiso le-ΔS yindawo engqongileyo ! Ingumcimbi wembono. Ukuba utshintshe amanzi amanzi kumphunga wamanzi, i-entropy iyanda amanzi, nangona iyancipha kwiindawo ezikuyo.
Kudideka ngakumbi xa ucinga ngokuphendula komlilo. Ngakolunye uhlangothi, kubonakala ngathi ukuphula i-fuel in components kuyo kwandisa ingxaki, kodwa impendulo iquka i-oksijeni, eyenza ezinye iamolekyuli.
Bala i-entropy yeendawo ezikuzo malunga neziphumo ezimbini ezilandelayo.
a) C 2 H 8 (g) + 5 O 2 (g) → 3 CO 2 (g) + 4H 2 O (g)
ΔH = -2045 kJ
b.) H 2 O (l) → H 2 O (g)
ΔH = +44 kJ
Utshintsho kwi-entropy yeemeko emva kokusabela kwamakhemikhali xa uxinzelelo oluqhubekayo kunye nobushushu bunokubonakaliswa ngolu hlobo
ΔS surr = -ΔH / T
I- AS surr yinguqu kwi-entropy yeenxa zonke
-HH ishushu esabelayo
T = Ukushisa okungapheliyo eKelvin
ΔS surr = - (- 2045 kJ) / (25 + 273)
** Khumbula ukuguqula ° C ukuya K **
ΔS surr = 2045 kJ / 298 K
ΔS surr = 6.86 kJ / K okanye 6860 J / K
Phawula ukunyuka kwe-entropy ejikelezayo kuba ukusabela kwakunzima. Ukuphendula ngokukrakra kuboniswa yixabiso elifanelekileyo le-AS. Oku kuthetha ukushisa kukhutshwe kwiindawo ezizungezile okanye ukuba imeko yenze amandla. Lo mpendulo ngumzekelo wokusabela komlilo . Ukuba uyayibona le ndlela yokuphendula, kufuneka uhlale ulindela ukuphendula ngokukrakra kunye noshintsho oluhle kwi-entropy.
ΔS surr = - (+ 44 kJ) / 298 K
ΔS surr = -0.15 kJ / K okanye -150 J / K
Le mpendulo yayidinga amandla kwiindawo ezikufutshane ukuqhubeka nokunciphisa i-entropy yeenxa zonke. Ixabiso elingu-ΔS elibi libonisa ukuphendulwa kokuphela komzimba, okwenza ukufudumala kwiindawo ezikuyo.
Utshintsho kwi-entropy yeendawo ezizungezile zokuphendulela 1 kunye no-2 yi-6860 J / K kunye ne--150 J / K ngokulandelanayo.
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwe-Ice ne-Snow?
I-Ounces ukuya kwiGrike yoGuqulelo lweCandelo leGraam
Ingaba i-Water Deep Water Sink okanye i-Float?
Indlela yokubala uxinzelelo lwe-Osmotic Example Problem
101 AmaClassics ukuba Uqale
Ifu Elilinganisa Kangakanani?
I-App Skateable yenza ifoni yakho ibe kwi-Skateboard
HILL - Gama igama kunye nemvelaphi
Inkukhu idla njani?
Xa Kuza Kuqala Ukuqala?
Yiyiphi i-Theory Field Theory?
Iikhibhodi yomculo Iingcebiso ngeNombolo yeeKhiye
Ihlobo: Ixesha Lama-Sunshine
Ukubuya emva kwendonga yomntu ofile: uJan noDean